Sawirro: Indhaha Ku Doogso Tartanka Liifka ee Odayaasha Qabaa’ilka Jubbooyinka. – Bogga Calamada.com
Shalay khamiistii waxa magaalada jilib ka dhacay tartan aan noociisa hore loo arag kaasi oo ay liifka ama toogta ku tartamayeen odayaasha ama salaadiinta beelaha daga Jubbboyinku.
Tartankan oo ka dhacay fagaaraha wayn ee macalin Aadan Xaashi loogu magac daray ayaa ahaa mid indhaha dadkii daawanayay aad usoo jiitay, fagaaraha waxa xiise gaara usii yeelay jawiga oo ahaa mid neecowda roobka iyo dooga hadda soo baxay ay isugu biireen.
Odayaasha ka qayb galayay tartanka oo badankoodu ahaa rag da’ah ayaa tartanka xiiso gaara usii yeelay, waxana kuusoo baxaya sida odayaashii Soomaaliyeed ay u kala baxeen kuwo sharafta ciziga jihaadka doortay iyo kuwo caado qaatayaal ah oo u baxay inay waxoogaaÂ laaluush ah kasoo qaataan lacagta doorashada ee gaalku keenay.
Wakhtiga la bilaabayay rimaayada ama liifka waxa si wayn dhinacyada nooga muuqday roobab si qurxoon oo saf siman ah u da’aya sida aad sawirrada ku aragtaa, roobkaasi oo markii dambe kala jaray tartankii socday dadwaynihiina ay roobkii ka carareen,
Si kadis ah ayaa loo kala dareeray markiiÂ dhibicda roobku bilaabantayÂ iyadoon wax ballan dambe ah loo sheegin dadka iyo wakhtiga la dhamaystiri doono tartanka isla markaana lagu dhawaaqi doono natiijada cidda ku guulasatay kaalmaha hore.
Nala daawo Sawiradan Qurxoon.
masha alaah waa tababar wanagsan alle ha xifdiyo mujaahidiinta iyo dhamaan dadka muslimiinta ah gaalada alle hajabiyo